Zhizha miriwo nemadomasi uye shredded hake | Kicheni Mapepa
Zhizha miriwo ine tomato uye shredded hake
Nhasi ndinokukoka iwe kuti ugadzirire imwe yeaya macasseroles ayo achapararira zvakanyanya kwauri. Iyo casserole iyo ine sevanopikisa miriwo yezhizha dzakadai zucchini kana aubergine. Rudzi rwe ratatouille iyo yatakabatanidza hanyanisi, mhiripiri, broccoli uye madomasi sehwaro.
Iyi yekubheka ine yakawanda yakanaka miriwo uye ine hutano hwakanaka. Unogona kushandisa iyi miriwo se ichienderana nenyama, hove, nyemba kana pasta. Zvakareruka sekugadzira zvekudya izvi nekuzvibatanidza kana kuzvisanganisa nemiriwo nemadomasi.
Kumba, kugadzira dhishi rakazara zvakakwana uye kutishandira sekudya kwemanheru kwemazuva akati wandei, ndakafunga kuwedzera shredded hake zvakananga ku casserole uye panguva yekupedzisira. Unogona kushandisa some chando hake chiuno, yakambodonhedzwa, nyowani hake kana kutsiva izvi nerumwe rudzi rwehuremu.
Iyi miriwo yezhizha nemadomasi uye shredded hake idyo iri nyore uye ine hutano chaizvo iyo yaunogona kusevha zvese kwemasikati uye kwemanheru.
1 hanisi huru
1 green green mhiripiri
1 zucchini huru
2 matomatisi akaibva, akasvuurwa
3 tablespoons tomato muto
3 hake mapepa
Mamwe mhandara yemafuta emuorivhi.
Chekerera hanyanisi uye mhiripiri uye sautee mune casserole nemaspuni matatu emamwe maorivhi emhandara emhandara kwemaminitsi masere.
Isu tinotora mukana wenguva ino kudzura mbichana uye dice zvese zviri zviviri aubergine uye zucchini.
Kamwe mumacube tinovawedzera kune casserole uye bika pamusoro wepakati kupisa 10 maminetsi ine muvharo.
Pashure wedzera broccoli mu florets uye gadzira iyo yese kwemaminetsi akati wandei.
Tevere isu munyu uye mhiripiri uye Wedzera diced tomato madomasi madiki uye akagochwa. Sanganisa uye ubike gumizve maminetsi kuti nyanya idonhe.
Pakupedzisira wedzera hake flaked, sanganisa uye gadzira imwe maminetsi mashoma.
Isu tinoedza uye kana zvichidikanwa tinogadzirisa poindi yemunyu.
Takanakidzwa nemuriwo wezhizha pamwe nemadomasi uye shredded hake.
Yakazara nzira kuchinyorwa: kudzidziswa » General » Zhizha miriwo ine tomato uye shredded hake
Codhi yakabikwa nemapatatisi uye mhiripiri